Kali Linux haisisina iyo default midzi mushandisi | Linux Vakapindwa muropa
Kali Linux haisisina iyo yekupedzisira midzi mushandisi
Kali Linux ndeimwe yeanonyanyo kufarirwa ehuniki kubira distros. Chero ani zvake akamboishandisa akamboona kuti yaive nemutemo wakasarudzika maererano nemudzi mushandisi izvo zvaireva kuti isu taigara tiri "superuser" mukugovera uku. Chero zvatakaita, takazviita semidzi. Anogumbura Security anotsanangura zvese izvi mune chakatumirwa chakaburitswa muna Zvita 31 kuti iwe unogona kuwana kubva Iyi link.
Sezvo ivo vachitsanangura, panofanirwa kuve neisiri-midzi modhi nekuti vazhinji vashandisi vanoshandisa Kali Linux senzira yavo huru yekushandisa. Kuti isu hatifanirwe kushandisa chero password kuti tiite edu ane hunhu kubiridzira mabasa zvakanaka kana isu tichimhanya iyo yekushandisa sisitimu kubva Live Live / USB, asi zvinhu zvinochinja kana zvasvika kune inoshanda sisitimu yatakaisa pakombuta yedu. Neichi chikonzero, shanduko iyi inodikanwa.
Kali Linux yakaunza shanduko yekuchengetedza nekuda kwekuzivikanwa kwayo
Mazhinji emidziyo iyoyo kumashure ipapo aida kuti mudzi uwane kuti umhanye kana kushanda zvakanyanya kana uchimhanya semidzi. Neiyi sisitimu yekushandisa inomhanya ichibva kuCD, isina kumutsiridza, uye iine maturusi mazhinji aida mukana wekumhanyisa kumhanya, yaive sarudzo yakapusa kuva ne "yese semudzi" modhi yekuchengetedza. Zvakaita zvine musoro wenguva yacho.
Kali Linux haikurudziri kuti titsiure kugovera kwedu kwatinoda, seUbuntu, Fedora, Arch Linux, nezvimwe, nehurongwa hwayo hwekushandisa. Ndiyo nharaunda iri kuona kuti iyi sarudzo, Inogumbura Security yaona uye yaunza shanduko iyi kuchengetedza ava vashandisi vari kuvaratidza rudo.
Neshanduko iyi, nguva inotevera kana mushandisi achida kuisa Kali Linux ivo vanofanirwa zadza nhanho yekugadzira zita rekushandisa uye password, sezvatinoita mukuparadzira kwakawanda kuripo. Shanduko diki, kusimudzira kukuru kwekuchengetedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kali Linux haisisina iyo yekupedzisira midzi mushandisi
Luis Manuel Cortes Tirado akadaro
Sarudzo huru neKugumbura Kuchengetedza sezvo vashandisi vazhinji vachisarudza kuisa Kali Linux sedistro huru pamakomputa avo, kunyangwe ini pachangu ndakazvifunga kakawanda. Nekuchengetedzwa uku kwekuchengetedza, zvinogona kuitika munguva pfupi.
Pindura kuna Luis Manuel Cortés Tirado
Ini handioni chero pfungwa mairi. Haisi distro yekushandisa seyakanyanya. Izvo vashandisi vasingazive izvi zvakapusa havafanirwe kana kuzviedza. Uye zvakatonyanya kushandisa se main distro.
Kuisa Kali sisitimu huru yekushandisa haina musoro kunze kwekunge iwe uchipedza zuva rese kuyedza yako imba / hofisi network.
Rangarira kuti Kali hachisi chinhu kunze kweDebian neese ecosystem yehondo, hazvina musoro kuiisa pamwe nepfungwa yekushandisa "zvakajairika", saka tinogona kunakidzwa nekuzviita takasununguka.
Zvinotaridza kwandiri kuti chinhu chakakosha uye chepuraimari, kana iri sisitimu inoshanda, inofanirwa kunge iri, uye zvakare kukundikana kukuru kwekuchengetedza, zvinofungidzirwa kuti zvinhu zvakapfava uye zvine hukoshi hukuru zviri kuitwa. Zvingave zvichitaura nezvekuchengetedzeka kunogumbura uye chishandiso chakafanana chiisefa kana chekuchengetedza, chingave chakachengeteka kunyangwe muhupenyu usb. Ndoziva iyo cucumber yakawanda inofanirwa kuve yakanyanya kukomputa chishandiso chemashiripiti inongofanirwa kunge iri sisitimu inoshanda kwazvo haha ​​... Ndatenda zvikuru kune zvese zvaunoitira nyika irinani uye mikana nemikana iyo iyo inopa, kunharaunda yekuvandudza ... Vakuru, vanababa, ndinokutendai zvikuru
Arch Linux 2020.01.01, yekutanga vhezheni ye2020 iri pano neLinux 5.4